XOG:- Khilaaf kii ugu xooganaa oo ka dhex curtay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cali C/laahi Cosoble – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Khilaaf kii ugu xooganaa oo ka dhex curtay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cali C/laahi Cosoble
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa dabagal dheeraad ah kusameeysay wararka sheegaya in madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu si toos ah uga hor yimid in markale dib loo soo doorto madaxweynaha haatan xilka haaya Xasan Sheekh Maxamuud inkale.
Ilo xog-ogaal ah oo ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay isku qabteen arrimaha doorashada xildhibaanada Aqalka hoose, kadib markii ay soo baxeen olole uu wado madaxweynaha Hirshabeele.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa sida la sheegayo maalmihii ugu dambeeysay taageeray islamarkaana awoodiisa isugu geeyay inay soo baxaan musharixiin xildhibaan oo si weyn uga horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh oo ay ka mid yihiin waxaana xildhibaanadaasi cusub ka mid ah, C/laahi Sanbaloolshe, C/laahi Goodax Barre iyo 4 xildhibaan oo kale, wuxuuna ciriiri geliyay inay guuleystaan musharixiin ay wadatay madaxtooyadda Villa Soomaaliya.
Dhinaca kale, ololaha madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegay inuu salka ku haayo fulinta mashruucii Imaaraadka Carabta ee madaxda maamul goboleedyada dalka lagu siiyay inay hor-istaagaan musharixiinta kooxda Damjadiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Si kastaba, madaxweyne Xasan Sheekh oo ka danbeeyay in Cali C/laahi Cosoble uu madaxweyne ka noqdo maamulka Hirshabeele, kuna taageeray dhaqaale iyo olole siyaasadeed ayaa hadda u muuqda madaxweynaha aan ilko laheyn oo lagu meel-gaaray, waxayna warar hoose sheegayaan in Cali C/laahi Cosoble taageersan yahay musharaxnimada Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.